Lola Tigraay: ‘Lammiilee Itoophiyaa 30,000 ol Sudaanitti baqatan keessaa harki caalaan ijoolleedha’ – UNHCR – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLola Tigraay: ‘Lammiilee Itoophiyaa 30,000 ol Sudaanitti baqatan keessaa harki caalaan ijoolleedha’ – UNHCR
Lammiilee Itoophiyaa kumaan lakkaawaman lola mootummaa Federaalaafi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru baqatanii gara Sudaanitti ce’an keessaa, walakkaa ol kan ta’an daa’imman ta’uu UNHCR beeksise.
(bbc) Sudaanitti qindeessaa deeggarsa yeroo balaa UNHCR kan ta’an Jeens Heesmaan, naannoo daangaa Itoophiyaa karaa Tigraayiin jiru bakka Kasalaa jedhamutti argamuun haala baqattootni Itoopiyaa kunniin itti jiran ilaaluu isaanii BBC’tti himaniiru.
Lakkoofsi namootaa daangaa ce’uun gara Sudaanitti baqachaa jiranii haalaan dabalaa akka jiru kan himan Jeens, ”amma namootni 30,000 ol ta’an Sudaanitti baqataniiru,” jedhan.
”Lakkoofsi kun guyyaa guyyaan dabalaa jira, kaleessa qofa namootni haaraan 2,300 ta’an as gahaniiru, kaleessa duras kan haaraa dhufan kuma shanii oli,” jedhu aanga’aan UNHCR kun.
Baqattootni Itoophiyaa kunniin karaa sadiin gara Sudaan dhufaa akka jiraniifi naannoo Kasalaafi Hamdayaat jedhamanitti simatamaa akka jiranillee himan.
Naannolee lamaan kanarraa lafa gara Kibbaatti fagaatee aragamuunis akkasuma namootni daangaa ce’anii baqachaa jiran jiraachuus Jeens himaniiru.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad erga gabaabaa twiitara gubbaatti guyyaa kaleessaa waayee namoota lola baqatanii daangaa ce’aniirratti maxxansaniin ”lammiilee keenya deebisuuf qophiidha,” jedhan.
”Mootummaan Itoophiyaa lammiilee keenya biyyoota ollaatti baqatan simatee deebisee hawaasa wajjiin makuuf qophiidha.”
”Namoota nagaa baqatan kanaaf qabeenya isaanii eegnee, deeggarsi namoomaa karaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa akka akka qaqqabu gochuufi yeroo deebi’anittis nageenya isaaniif wabii kenninaaf” jedhan.
UNHCR naannoo Hamdayyaat jedhamu buufata baqattoota dhibbaan lakkaawamuuf gahuu danda’u kan qabu akka tureefi ”amma baqattootni achitti argaman humnaa ol ta’uu isaaniirraa kan ka’e magaalaa xiqqoo Hamdayyaat jedhamtutti dahoo argatan kamuu jala bulaa jiru,” jedhan.
”Uummatni naannichaa arjaa ta’uu isaatiin baqattoota Itoophiyaa kanaaf waan qabu hiraa jira,” jedhan.
Hooggantootni naannichaas lafa baqattootni kun irra qubatan mijeessuun gargaaraa akka jiranis dubbatan.
Qindeessaan yeroo balaa UNHCR damee Sudaan kun naannoo daangaatti baqattoota Itoophiyaa yeroo dubbisanitti, lola naannoo isaanii keessatti adeemaa jirurraa kan ka’e sodaa guddoo keessa jiraachuu hubachuu himan.
”Namootni gariin ani dubbise miidhaafi waraana guddoo keessaa baqatanii akka dhufan natti himaniiru,” kan jedhan Jeens, bakka amma jiran kanattillee sodaa waan qabaniif ”sagalee ofirratti eegaa asitti homaa hin taanu jedhanii gaafatu,” jedhan.
”Guyyaa guyyaan kumaan kan lakkaawaman gara kanatti baqachaa waan jiraniif deeggarsa barbaachisu kennuutti hanqinni jira,” jedhan.
Sadarkaa idila addunyaattis ta’e dhaabbilee Sudaan keessa jiran irraa deeggarsa walitti qabaa akka jiranis himaniiru.
Wal dura dhaabbannaan mootummaa federaalaa fi naannoo Tigiraay hammaachaa dhufuun gara haleellaa waraanaatti erga ce’ee torban lama tahuuf deema.
Sadaasa 03, 2020 halkan humni addaa naannoo Tigraay raayyaa ittisa biyyaa achi buufatee jiru irratti haleellaa raawwachuu isaatiin MM Abiy humni waraanaa tarkanfii akka fudhatu kan ajajan.